Ime ụlọ ịsa ahụ okpukpu abụọ na-adị ọcha ọla edo
Home / Ngwa / Ngwa eji aru ulo / WOWOW Hajiri ọla nhicha ọla edo
WOWOW Brass Gold Towel Hooks
Kpọtụrụ ndị ahịa ka ha nweta nko nhicha ahụ na - akwụghị ụgwọ: sales@wowowfaucet.com, onyinye na mbupu n'efu.
Ihe a na-eji akwa ime ụlọ ịsa ahụ mmadụ abụọ ga-enyere ndị mmadụ aka ịzụ ahịa ụlọ ịsa ahụ, ebe a na-azọpụta ụlọ, makọọ maka ime ụlọ ihi ụra, kichin, ụlọ ịsa ahụ, ebe a na-asa akwa, akwa mmiri, ebe ntụrụndụ, na ebe izu.
Mpempe ụlọ ịsa ahụ ọla edo na-acha ọcha na-ejikọ nkọwa 4020301BGD
Ebubere nke oke-notch sus 304 igwe anaghị agba nchara na -ebi ngwa ngwa yana ịdabere.
PVD Zirconium ọla edo adịghị mma gosipụtaghị ọkwa ọ bụla na ịnagide scrapes kwa ụbọchị, nlekọta kwa ụbọchị na-akwụ ọtọ, na-eme ka ọ dị mma na anya zuru oke. Nhazi oge a na achikota ya na otutu ulo di nma ma nye otutu onodu maka ihe ndi eji abanye ulo, ebe ebe a na-asa aru, na ebe a na asa aru.
Ngwaahịa na-efu - ọnụahịa enyi maka ihe dị elu, nhọrọ zuru oke maka ụlọ mposi.
Mfe ịwụnye, na ngwe ngwe gụnyere
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịzụta site na Amazon ma ọ bụ jiri ọnụahịa tụọ, pịa ebe a: Double Robe Hooks Gold
SKU: 4020301BGD Categories: Ngwa, Ngwa eji aru ulo, Nkwekọrịta egosipụtara Tags: Nwa ọla edo ọla edo, Nnukwu Mgbidi, Mgbidi gbara
0.5 n'arọ = 1.1023 lb = 17.6370 oz
Wowow Bathroom Faucet Vessel Vanity Sink Gbapụta…
WOWOW Brusel Nickel Aka maka ite Filler Faucet
WOWOW Automatic Ncha Dispenser Wall Mount